माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दा पहिलो पटक १ फागुन ०५२ मा आक्रमण गरेको रोल्पाको होलेरीस्थित प्रहरी चौकीको भग्‍नावशेषमा निर्माण गरिएको शान्ति स्मारक । दुर्गालाल केसी
१ फागुन ०५२ मा रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकीमा आक्रमण भयो । रोल्पाका वर्षमान पुनको कमान्डमा रहेका ३६ लडाकुले चौकी आक्रमण गरेका थिए । २८ असार ०५८ मा दोस्रो पटक होलेरी चौकी आक्रमण भयो । लामो समयसम्म ठूलो संख्याका प्रहरी माओवादी नियन्त्रणमा रहे ।
दोस्रो आक्रमणले देशमा सनसनी मच्चायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिनुपर्‍यो ।
सशस्त्र द्वन्द्वका यिनै घटनाका कारण होलेरी देश–विदेशमा चर्चामा रह्‍यो । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले युद्धको घोषणा गर्दा पहिलो दिनमै होलेरी चौकीमा आक्रमण गर्नु र दोस्रो आक्रमणबाट पनि सरकारलाई ठूलो धक्का लाग्‍नु यसको कथासँग जोडिएका संयोग हुन् । यी आक्रमणका मुख्य कमान्डर पुन थिए, जुन अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री छन् । यसअघि उनी अर्थमन्त्रीसमेत भइसकेका छन् ।
युद्धको पहिलो आक्रमण स्थलमा अहिले शान्ति स्मारक बनाइएको छ । पहिलो पटक प्रहरी चौकी आक्रमण भएको स्थलमै स्मारक ठडिएको छ । चौकीको भग्‍नावशेषमा रहेको स्मारकमा दुइटै आक्रमणबारे संक्षिप्त जानकारी दिइएको छ । उक्त स्मारकको उद्घाटन आक्रमणकारी टोलीका कमान्डार पुनले गरे– त्यो पनि १ फागुनकै संयोग पारेर ।
पुनले स्मारक उद्घाटनपछि होलेरीमै युद्धकालीन अनुभव सुनाए । उनले कसरी होलेरी आक्रमण गरेका थिए ? ती आक्रमणका उपलब्धि के भए ? अब होलेरी के चाहन्छ ? यी विषयमा उनले जनतासँग अन्तर्क्रिया पनि गरे ।
“कुनै बेला लुटेरा, लडाकु भनिने मान्छे अहिले नेता भइयो, मन्त्री भइयो,” उनले भने, “हिजो खोला देख्यो कि एम्बुस थाप्‍ने तयारी हुन्थ्यो, अहिले ऊर्जा निकाल्छौँ । होलेरी पनि हिजो द्वन्द्वको केन्द्र थियो, अब समृद्धिको केन्द्र बन्न सक्छ ।”
होलेरीमा आक्रमणका शृंखला
पहिलो पटक आक्रमण गर्दा पुनको कमान्डमा रहेको टोली अघिल्लो दिन नै होलेरीमाथिको गढीलेक आएर बसेको थियो । हिउँ परिरहेकाले बसाइ निकै कठिन थियो । भोलिपल्ट बेलुकापख मात्रै आक्रमण भएको थियो । टोलीका सहकमान्डर वर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन थिए । लडाकु टोलीका सदस्यहरू पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी, रोल्पाका प्रदेश सभासद् दीपेन्द्र पुनलगायत थिए ।
१२ दरबन्दी रहेको चौकीमा ८ जना मात्रै प्रहरी कार्यरत थिए । “मान्छे मार्ने आदेश थिएन । युद्ध सुरु भएको जानकारी दिने र प्रहरीलाई आत्मसमर्पण गर्न लगाउने योजना थियो,” पुनले भने, “केही फायरिङ गरेर युद्ध सुरु भयो भन्यौँ । प्रहरीले जागिर जाने भन्दै आत्मसमर्पण गर्न मानेनन् । हामीले पनि केही विस्फोटक पदार्थ लिएर छाडिदियौँ ।”
उक्त आक्रमणसँगै रुकुमको आठबिसकोटस्थित राडी प्रहरी चौकी र सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी प्रहरी चौकीमा पनि आक्रमण भएका थिए । “बढी दमन भएका ठाउँमा प्रतीकात्मक रूपमा आक्रमण गर्ने योजना थियो,” पुनले भने, “वैदेशिक लगानी निरुत्साहित गर्न बालाजुको कोकाकोला कम्पनी र गोरखाको च्याङ्लीटार कृषि विकास बैंकमा पनि आक्रमण भयो ।”
सुरुमा प्रतीकात्मक आक्रमण मात्रै भएको पुनले बताए । त्यसपछि २८ असार ०५८ बिहानपख होलेरी प्रहरी चौकीमा दोस्रो आक्रमण भयो । प्रहरी हवल्दार राजबहादुर गिरीको मृत्यु भयो । ७५ प्रहरीलाई माओवादीले नियन्त्रणमा लिए । सबै सरकारी कार्यालयमा आगजनी भयो । त्यसबेला लडाकु कमान्डर नन्दबहादुर पुन र कमिसार वर्षमान पुन थिए । भालुवाङ सशस्त्र प्रहरी क्याम्पमा आक्रमण गर्न खोजेकामा सूचना चुहिएपछि एकाएक होलेरी आक्रमण गरिएको थियो ।
प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएर नुवागाउँको डाँडामा राखियो । भोलिपल्ट बिहानपख खाना खाइरहेका बेला नेपाली सेनाका तीन वटा हेलिकोप्टर आए । सेना छाडेर हेलिकोप्टर फर्कंदै गर्दा माओवादीले गोली प्रहार गरेपछि हेलिकोप्टर भाग्यो । हेलिकोप्टरमा केही क्षति पुग्यो । केही बेरपछि थप दुई हेलिकोप्टर आए । त्यसलाई पनि गोली प्रहार गरेपछि भागे । नियन्त्रणमा लिएका प्रहरीलाई लडाकुको एक टोलीले सल्यानतर्फ लिएर गयो । १ हजार ५ सयको लडाकु टोलीमध्ये ५ सय जनाको टोली नुवागाउँतर्फ झर्‍यो ।
नुवागाउँमा झर्दै गर्दा सेनाको ४५ जनाको टोलीसँग जम्काभेट भयो । “सेना आफ्नो पोजिसनमा सुरक्षित स्थानमा बस्यो । हामी पनि आफ्नो पोजिसनमा बस्यौँ,” पुनले भने, “त्यसपछि माइकबाट हाम्रो सेनासँग लड्ने योजना छैन । तपाईंहरू आफ्नो बाटो लाग्‍नुस् भन्यौँ । अन्तमा चिट्ठीबाट खबर आदानप्रदान भयो ।” दुई–दुई जना नि:शस्त्र लडाकु र सैनिकबीच वार्ता गराई दुवै पक्ष आ–आफ्नो बाटो लाग्‍ने सहमति भएको पुनले बताए । त्यसपछि पुनको टोली गैरीगाउँतर्फ लागेको थियो ।
भोलिपल्ट सञ्चार माध्यममा माओवादी लडाकुहरू सेनाको घेरामा रहेको समाचार आएको थियो तर उक्त कुरा यथार्थ नभएको पुनले बताए । त्यही क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष सेना परिचालनको प्रस्ताव लगेका थिए । राजाले असहमति जनाएपछि कोइरालाले राजीनामा दिएका थिए । यस घटनाका कारण पनि होलेरी चर्चामा आएको थियो । त्यही वर्ष ८ मंसिरमा दाङ सदरमुकाम घोराहीमा आक्रमण भयो । पहिलो पटक सैनिक ब्यारेक कब्जा गरेका माओवादी ९ गते बिहान होलेरी पुगेका थिए । त्यहाँ माओवादीको मेला नै थियो । हतियार ओसारपसार भइरहेका थिए । त्यसबेला पनि होलेरी सरकारी निगरानीमा पर्‍यो ।
होलेरी बजारमा सडकमै बल खेल्दै बालबालिका । दुर्गालाल केसी
हत्या र यातना
त्यसयता होलेरीले धेरै कष्ट बेहोरेको छ । धेरैले बिनाकारण सन्तान गुमाएका छन् । होलेरी आक्रमण गर्ने मुख्य कमान्डर सबै सत्तामा छन् । यति लामो युद्धपछि जनताले के पाए ? यो प्रश्न सबैजसो घरमा छ । रुन्टीगढी–६ होलेरीका भैरवबहादुर विकलाई कत्ति पनि चित्त बुझेको छैन । ११ चैत ०५९ मा छोरा वामदेव विकलाई सेनाले पक्राउ गरेर मार्‍यो । “हामी कुनै पनि दलमा नभएका सर्वसाधारण मानिसलाई किन सजाय ? मेरो छोरा होलेरीको बासिन्दा भएकै कारण मारियो,” उनले भने, “यसको न्याय कसले दिन्छ ? फेरि नेत्रविक्रम चन्दले युद्ध भनिरहेका छन् । यसलाई सरकारले कसरी रोक्छ ?”
११ मंसिर ०५८ मा संकटकाल घोषणा भएपछि होलेरीबासीले झनै यातना भोगेका थिए । त्यसपछि होलेरीमा प्रहरी बस्‍न नसक्ने भयो । माओवादीले होलेरीलाई आफ्नो आधार क्षेत्र मान्‍न थाले । सेनाले निशाना बनाउन थाल्यो । त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया नआउँदासम्म कहिल्यै राम्रोसँग निदाउन नपाएको होलेरीकै टपेली डाँगीले बताइन् ।
“माओवादीलाई सधैँ खाना खुवाउनुपर्ने । उनीहरूका हरेक कार्यक्रममा हिँड्नुपर्ने,” उनले भनिन्, “सेना आयो भने नकुटेर कहिल्यै फर्कंदैनथ्यो । माओवादी आएर सेना, पुलिस लुकाएका छौ कि भनेर घर खानतलासी गर्थे ।”
अहिले देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सर्वसाधारणको दैनिकीमा केही बदलाव नआएको उनले बताइन् । “नेताहरू सत्तामा गए, महँगा गाडी चढ्ने भए तर हामीले के पायौँ ?” उनले भनिन्, “हाम्रो अवस्था त उस्तै छ । यहाँको केही विकास भएन ।”
होलेरीमा राम्रो अस्पताल, गुणस्तरीय सडक र युद्धको घाउ बिर्साउने विकासका कार्यक्रम चाहिएको उनले बताइन् ।
अहिले पनि डाक्टर खोज्दै दाङको घोराही पुग्‍नुपर्छ । सडक डरलाग्दो छ । संघीयता आएपछि होलेरी रुन्टीगढी गाउँपालिकामा पर्छ । सखी, झेनाम, डुब्रिङ, दुविडाँडा, जेदबाङ, मसिना र जौलीपोखरी गाविस मिलाएर रुन्टीगढी बनाइएको हो । अहिले यहाँ २७ हजार ९ सय २९ जनसंख्या छ । यसमध्ये ४६ प्रतिशत जनजाति छन् ।
होलेरी अहिले गाउँपालिका केन्द्र भएको छ । केही चहलपहल बढेको छ । अब यसलाई युद्ध पर्यटनको केन्द्र बनाउने योजना रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष बालाराम बुढाले बताए । “पहिले युद्धले आक्रान्त भयो । अब यसलाई युद्ध पर्यटनका रूपमा विकास गर्ने सोचमा छौँ,” उनले भने, “पहिलो आक्रमण भएको स्थल, गुरिल्ला ट्रेकिङ र माओवादी लडाकुका शिविर भएका स्थानलाई पर्यटकीय अवलोकन केन्द्र बनाउने योजनामा छौँ ।”
शान्ति प्रक्रियाका क्रममा रुन्टीगढीकै दहवन र उँघामा माओवादी लडाकुका शिविर बसेका थिए । युद्धकालमा रुन्टीगढीमा राज्य पक्षबाट ३० र विद्रोही पक्षबाट ९ जनाको ज्यान गएको बुढाले बताए ।
प्राकृतिक रूपले पनि होलेरी क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बनाउन सकिने यसबारे अध्ययन गरेका संस्कृतिविद् डा गोविन्द आचार्यले बताए । “स्वर्गद्वारी महाप्रभुको जन्म, तपस्या स्थल पनि यही हो । स्वर्गद्वारी आवागमनका लागि पनि होलेरी महत्त्वपूर्ण केन्द्र छ,” उनले भने, “प्राकृतिक रूपमा पनि हिमालको अवलोकन गर्न पाइने, गुराँसे बगैँचा र ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्र पर्यटन विकासका आकर्षण हुन् ।”